Ho fampakarana ny fampakarambady an'i Megan Markle sy Prince Harry ny sangan'asan'ny mpanao gazety dia voasariky ny fianakavian'ny mpanjaka. Ny tsipika mahaliana rehetra mifandraika amin'ny fiainan'i Windsor, dia resahina sy naverina avy amin'ny tabloids.
Tsy ela dia hiditra ao amin'ny fianakaviam-ben'ny mpanjaka i Megan, midika izany fa tsy maintsy mahazatra ny fomba amam-panao tsy mahazatra izy, izay toa tsy dia mazava loatra.
Hitanao fa amin'ny dingana rehetra, na fitsangatsanganana manerana ny firenena, fitsangantsanganana any ivelany na vakansy, ny mpikambana ao amin'ny filoham-panjakana dia tsy afaka mivoaka eny ... fisaonana fisaonana! Vao haingana no nanoratan'i Express (Grande-Bretagne) izany.
Mitovy amin'ny fitaovam-piadiana rehetra raha misy maty
Aiza ny toerana hafahafa momba ny protocol, manontany anao? Ny fanazavana dia mitoetra eo amin'ny sehatra. Raha sendra tampoka ny fianakavian'ny mpanjaka ao amin'ny tontolon'ny tontolo manaraka, ny havana rehetra ao amin'ny maty dia mitaky ny fisaonana mba hijerena ny fitsipiky ny fahamendrehana amin'ny vahoaka.
Ny mpanjakavavin'ny fitondrana dia namorona ity fitsipika ity tamin'ny taona 1952, rehefa maty ny rainy, George VI. Tamin'izany fotoana izany dia nitsidika an'i Kenya ny mpanjakavavy sy ny vadiny.
Rehefa tonga tany an-trano izy, dia tsy afaka nandao an'ilay fiaramanidina i Elizabeth mandra-pahatongan'ny mpanampy azy nitondra ny akanjon'izy ireo tamin'ny mainty.
Tsy miaina miaraka amin'ny vadiny intsony i Julia Roberts
Tim Burton sy Helena Bonham Carter
Adam Levin sy Behati Princess
Lady Gaga dia nandray anjara tamin'ny hazakazaka goavana "500 miles of Indianapolis"
David Beckham dia voavonjy tamin'ny dokotera mangatsiaka sy ny lehilahy zokiolona
Fotoam-pialantsasatry ny Romantika: Nankafy ny faran'ny herinandro tao amin'ny orinasa Christiano Carino i Lady Gaga
Patrick Schwarzenegger dia nahita fahazoan-dàlana ho an'ny rivotra Miley Cyrus
Tonta amin'ny akanjo fohy
Fanazavana ny trano
Karazan-tsahona sy tongolobe
Tranom-bokatra mofomamy miaraka amin'ny rongony marary - recipe
Taom-baovao amin'ny endrika disco
Kate Middleton dia namerina tsy nahy ilay sary malaza tamin'ny akanjo nataon'i Marilyn Monroe
Tsy misy sary fakana sary: ​​Ashley Graham nizotra tamin'ny lamasinina ara-panatanjahantena nanodidina ny tanàna
Sakafo vita amin'ny henan-kisoa any an-trano
Fivarotana any Dresden